Falanqaynta Websaydhka Guji | Martech Zone
Falanqaynta Websaydhka Riix
Axad, Abriil 15, 2007 Axad, Abriil 15, 2007 Douglas Karr
Halkaan ka hor Sellsius ayaa kugula talinaya Kooxda sida web kale Analytics xirmo. Hadda waxaan adeegsadaa Google Analytics waana wax fiican - laakiin wali way adag tahay in la wareego oo la daadiyo xogta aad u baahan tahay. Shaashadda shaashadda Kooxda u eg cajiib, ma sugi karo inaan qodo.
Tani waxay noqon kartaa xirmo aan kula taliyo dhammaan macaamiishayda - waa lacag la’aan in la isqorto. Waxaad u cusbooneysiin kartaa nooca xirfadeed kaliya $ 2 bishiiba!
Ku qanci booqdayaashaada shabakada waqtiga saxda ah ee Foomka
Apr 15, 2007 at 9: 45 PM
Waxaan isticmaali jiray codsigan oo kani ku saleysan yahay, loona yaqaan 'pmetrics'. Nasiib darrose maalin dhaweyd si uun baa loo kala lumay. Waxaan bilaabay isticmaalkiisa kadib markii aan ka dheregsanaa xaddidaadda gorfaynta google, midkeedu google kani kamuu bixin dadaal ku filan.
Waxaan ka helay xulashooyinka loo yaqaan 'pmetrics' inay fiican yihiin, laakiin isbarbar dhig kuma noqonin gorfaynta google, lambarradaydu markasta way ka yaraayeen oo badh ka mid ah astaamuhu ma shaqeynin.
Websaydhkan loo yaqaan 'Clicky' wuxuu la mid yahay sida qalabka loo yaqaan 'pmetrics' oo wata uun calan cusub. Waxaan rajaynayaa in adeegan la dhajiyay oo uu si fiican u shaqeynayo, waan isku dayi doonaa (isku xirka gudbintaada :)). Waxaan rajeynayaa xaqiiqda ah in arjigan uu yahay ilo furan uu macnaheedu noqon doono in farabadan oo ah barnaamijyada tirooyinka websaydhka qabow ay bilaabi doonaan inay soo baxaan maaddaama ay jirto meel diidmo ah oo weli u bannaan qof inuu yimaado oo uu sameeyo barnaamijka taraafikada webka midig.
Apr 15, 2007 at 10: 51 PM
Ka dib markaan u adeegsado dhowr saacadood waxaan cadeynayaa in tani aysan laheyn wax dhibaato ah oo aan kala kulmay daawada. Adeeg weyn.
Apr 16, 2007 at 8: 14 AM
Wow, taasi waa jaantus fiican, nadiif ah, oo si fudud loo akhriyi karo. Waxaad u maleyneysaa in shirkad balaayiin doolar ah sida Google ay awoodi doonto inay ugu yaraan hesho jaantus u muuqda mid wanaagsan. Waad ku mahadsan tahay tilmaanta!
La Taliyaha Falanqaynta Webka
Sep 19, 2007 at 6: 51 AM
Waxaan eegay Clicky laakiin wali waxaan qabaa fikirka ah in Google Analytics uu ugu fiican yahay bilaabida gorfaynta webka. Haddii aad ku aragto Google xaddidaadda markaa waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad bilaabi lahayd raadinta xalka lacag bixinta sida ClickTracks ama NetTracker si ay kuu siiso awoodda jawaab celinta su'aasha.